विहेको १४ बर्षपछि शहरमा घर किन्न खेत बेचेर खातामा पिस पैसा राखेकै दिन ६४ लाख लिएर प्रेमीसँग श्रीमती भागिन – Classic Khabar
August 27, 2021 151
प्रेम अन्धो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अक्सर सुन्छौँ तर एकदम कम मात्रै त्यस्तो देख्न पाइन्छ । हिन्दु धर्ममा विवाह सात जन्मसम्मका लागि गरिन्छ । यदि दुई मध्ये कसैको बिश्वास टुट्यो भने पति र पत्नीको सम्बन्धमा दरार आउन धेरै समय लाग्दैन । त्यस्तै एउटा घटना भारत, बिहारमा पनि देखिएको छ ।
Prevभागबन्डा मिल्यो, देउवा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कति र कुन मन्त्रालय ?
Nextवडाध्यक्षको कार्यकक्षमै के हुँदैथ्यो यस्तो ? स्थानियले नेता र शिक्षक सहित ३ जनालाई थुने